सरकार ! भोको पेट बस्न नपरे हुन्थ्यो.. – BikashNews
२०७७ वैशाख २६ गते १६:०७ नारायण ढुङ्गाना
असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारी दिने निर्णय यही बैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा चलाउन दिने सरकारको वैशाख २४ को निर्णय छ । त्यसैलाई आधार मानेर नगरपालिकाले मेस बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । तर मजदुरलाई रोजगारी दिने विषयमा नगरपालिकाले आवश्यक तयारी गर्न सकेको छैन । मेस बन्द भएपछि भोलिदेखि दैनिकीमा समस्या पर्ने एक मजदुर रञ्जित रायले बताP ।
युवाले मेस बन्द हुने खबर सुनाएपछि लाइनमा बस्ने मजदुर निरास भएका थिए आजसम्म त बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या थिएन, भोलिदेखि मेस नचले पेट कसरी भर्ने भन्नेमा उनीहरुको चिन्ता छ । मजदुर रायले गुनासो गर्दै भने, “जे हुन्छ हामी काम गर्छाैँ, तर सरकारलाई अनुरोध ! भोको पेट बस्नु नपरे हुन्थ्यो ।”
बालुवा, मसला (सिमेन्ट) घोलेर जीवन गुजारा गर्ने अर्जुन तामाङ लकडाउनपछि बेकामे भएका छन् । उनले यहाँ १९ दिनदेखि नै खाना खाँदै आएका छन् । सरकारले काम दिने भन्दा उनी अच्चम्म मान्छन् । “खै हामी जस्तो गरिबलाई कसले काम देला”, उनले थपे, “मेस चलेन भने हामी भोकभोकै बस्नुपर्ने हो कि ।”
उदयपुरकी दीना चन्द जोरपाटीमा मकै पोलेर आएको कमाइले तीन जनाको परिवारको गुजारा चलाउँथिन् । मकै पोल्ने काम ठप्प भएको डेढ महिना नाघ्यो । मेसकै कारण आफू र बालबालिकालाई खाना खुवाउन उहाँलाई समस्या थिएन । मेस बन्द हुने थाहा पाएपछि भने उनी पनि चिन्तित छिन् ।
होटल तथा चिया पसलमा काम गर्नेदेखि सङ्गठित र असङ्गठित मजदुर, शिक्षक, विद्यार्थीसमेत मेसमा खान आएका छन् । “यो अवधिमा हामीले झण्डै २६ हजारलाई खाना खुवाइसकेका छौँ”, नारायणटार युवा क्लबका अध्यक्ष धर्म थिङ लामाले भने, “मेस नचल्ने भएपछि भोलिदेखि असङ्गठित मजदुर छनोट गरेर उनीहरुलाई आयआर्जनमा कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यो अभियानमा लाग्छौँ ।”
क्लबका सल्लाहकार तथा नयाँ जीवन नेपालका अध्यक्ष राजन खनाल यसरी मेस चलाएका संस्थासँग छलफल गरेर मजदुरको समस्या समाधानमा सरकार तथा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । “मेस बन्द भएपछि भोलिबाटै पेट भर्ने समस्या हुन्छ, अनि मजदुर कहाँ जाने”, प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने, “यो अवस्थामा सरकारसँग पनि काम छैन, मजदुर अलपत्र हुनुपर्छ ।” मजदुरको समस्यातर्फ बेलैमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।
काममा नजानेलाई त्यसको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम बराबरको खाद्यान्न दिइने छ । तर राहत वितरणमा सकस भएको स्थानीय तहलाई यसरी असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई काम दिने कुरा चुनौतीपूर्ण छ । रासस